XOG:- Xildhibaanada is-badel doonka ah oo laga yaabo inay doortaan musharax aan la fileynin (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xildhibaanada is-badel doonka ah oo laga yaabo inay doortaan musharax aan la fileynin (AKHRISO)
Waxaa is-badel aan caadi ahayn uu haatan ku yimid qaabka doorashada dalka, kadib markii baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ay kusoo biireen tiro badan oo dhalinyaro ah, kuwaas oo doonaya inay is-badel ka sameeyaan dalka.
Baaritaan dheeraad ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn sameeysay ayaa waxay kusoo ogaatay in qaar ka mid ah xildhibaanad laaluush ku noolka ah ay ka wal-walsan yihiin xildhibaanada kale ee is-badel doonka ah.
Xildhibaanada is-badel doonka ah ayaa la sheegayaa in tiro ahaan ay gaarayaan 145 xildhibaan, halka kuwa taageersan madaxweyne Xasan Sheekh ay gaarayaan illaa 108 xildhibaan, taas oo ay micnaheeda tahay inay badan yihiin kuwa is-badel doonka ah.
Inkastoo adeegsiga laaluushka iyo cod iibsiga doorashadii gudoonka baarlamaanka uu xilligaasi aad u yaraa ayaa hadane waxay natiijada doorashadaasi kusoo idlaatay meel wanaagsan, waxaana daaqada ka baxay musharixiin si weyn ugu dhawaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xildhibaanada taageersan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka cabsi qaba in doorashada dhawaan dhici doonto ay kusoo baxaan musharixiin aan la fileyn, taasoo xaaladda Soomaaliya is-bedel weyn ku keeni karta, waxaana xubnaha farta lagu fiiqayo ka mid ah:-
1- Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo
3- Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan)
4- Jibriil Ibraahim Cabdulle